Iwo gumi Emhando yepamusoro Magetsi Bikes Muna 10 | ebike Shuangye
musha Iwo gumi Akanakisa Magetsi Bikes Muna 10
Shuangye ndeye makore gumi nemaviri OEM & ODM yemagetsi bhasikoro ruzivo mugadziri, anogona kugadzira mota paramende, bhatiri kugona, logo, package (ect.) Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu. Pano panokurudzira gumi emhando dzakanakisa emabhasikoro emagetsi muna 12.
Gomo remagetsi bhasiketi A6AH26
A6AH26 modhi ndeimwe yekutengesa kunopisa kwemagetsi emagetsi emakomo bhasikoro, uye iri fashoni pakati pevachavha. Kune makumi maviri nemasere padiki, 26 padiki uye 27.5 padiki bhasikoro furemu uye mupendero wekusarudza. Iko kune inomhanya-mhanya isina brashi mota pane ino bhasikoro yemagetsi, unogona kusarudza 29W / 250W / 350W / 500W mota parameter, uye ipapo kwira kusvika 750-25km / h max kumhanya. Iyo inouya ne40V kana 36V lithium bhatiri iyo yakagadzirirwa kuti igare, uye nechaji imwechete, mabhasikoro anogona kunakidzwa kusvika 48-40km pamutero mumwe, uye akatakura huremu hunosvika ku60kg panguva. Iyi ebike inouyawo ne shimano 150-yekumhanyisa system, kune zvakare 21/7 kumhanya uye ine matatu mamodhi: anobatsira bhasikoro, e-bhasikoro uye chitiviri - sarudzo ndeyako!
Bike yemagetsi reguta A5AH26
A5AH26 inokwanisika, yakagadzikana, uye inokwanisika, dhizaini magetsi emagetsi bhasiketi anouya mune imwechete 26 inch (kana 28 inch) saizi size, maviri akajairwa mavara (White neNhema), ine yakagadzirika heigh stem inovandudza inokodzera uye 100mm yekufamba shanduko yokumisa forogo. nekugadziriswa kwekuvhara. Yakagadzirira marudzi ese emamiriro ekutasva uye maitiro ane yakazara-yakafukidzirwa epurasitiki fenders, 3W yekumberi mwenje ne USB yekuchaja chiteshi, KENDA tire, 160mm mehendi disc mabhureki. 350 watt brushless hub-mota yakaiswa kumashure kwehure vhiri ne 36v 10ah lithium bheji pakiti kwenguva refu kutasva, pedal assist uye throttle mode, inoita kuti iwe utore nyore. (Iwe unogona zvakare kusarudza 250w / 500w / 750w mota uye 36v 8ah / 13ah, 48v 8ah / 10ah / 13ah / 15ah bhatiri)
Fat mafuta emagetsi bhasikoro A6AH26F
A6AH26F yakanaka yemagetsi bhasikoro nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, iyo 26 * 4.0 anti-skidding mafuta matairi inopa kutakurwa uye kuyambuka for--nzira cycling nyore, uye inoshongedza zviri nyore kune chando, jecha, giravhi uye zvingangoita chero humwe hunyanzvi hwetopiki. Kune vairety yepec of motor paramende uye bhatiri kugona kwako kusarudza maererano newe zvaunoda, kune makumi matatu nematanhatu / 36w / 250w / 350w, 500v 48w / 500w / 750w, 1000v 60w brushless mota, uye 750v 36ah, 10v 48ah / 10ah / 13ah / 15ah, 20v 60ah / 13ah bhatiri. Kune idzi mota spec, kunyange inomira inowanzoita yekumhanya yemhepo, bhatiri rakazara rekubhadhara rinopa kusvika 13.6-40km yekutyaira kwemagetsi. Yakakura ruvara LCD kuratidza ine entuitive inoita kuti iwe uone iyo bike chaiyo-nguva info zvakajeka.
Folding yemagetsi bhasikoro A1-7
A1-7 inogona kuve yakavimbika 20 inch yemagetsi bhasikoro yekuenda kuenda kunoshanda, kana katatu zvakapetwa zvakatsetseka mutraki remota yako kuti ubve-munzira kuongorora. Iyi bhasikoro yakagara yakaungana uye yakagadzirira kuenda, asi iri nyore kupeta kuitira nyore kuchengetedza, iko kukwirira kuchinjika zvichiita kuti zvive nyore kushandisa kune vanhu vakuru uye vechidiki zvakafanana nechigaro uye mubato wekubata kuti uenderane nehukuru hwesayizi. Inofambiswa ne250w kana 350w isina brushless mota, iyo max torque inopfuura 30Nm kana 35Nm, inogona kuve inoitiswa necadence sensor yecadence based pedal assist kana trigger throttle, inokwanisa kumhanyisa inosvika 25-30km / h, mune yakachena yemagetsi modhi uye inofambiswa ne36v 8ah / 10ah yakavanzwa bhatiri. Iyi e bhasikoro kunyangwe inogona kuve yakagadzirirwa 500w mota uye 36v 13.6ah bhatiri.
Urban yemagetsi bhasiketi A5AH24
A5AH24 iri 24 inch commuting ebike nemapurasitiki fenders uye kumashure simbi yeraki, inowanikwa mune mbiri yakajairwa sarudzo (White neNhema). Pane akamhanyisa upamhi apa kusvika pa25-35km / h aine 36v 250w / 350w kuseri kwebrushless hub-mota nemitambo bhatiri rakavanzika re 36v 10ah rinogona kugara kusvika 40-80 km. Iyo yakapfava kwazvo, uye inouya nemutengo unodhura - shanduko yakanaka kubva kune mamwe e-bikini. Pane kukosha kukuru kwakapihwa zvemhando yepamusoro zvinhu: 3W LED mbichana mwenje ne USB yekuchaja chiteshi, isina kuwanikwa mvura LCD kuratidza, F / R: V-brake (F: V-brake / R: Magetsi mabhureki ane mota kukiya). Kune matatu anoshanda modes, anobatsira, anofamba uye e-bhasikoro, uye unogona kuchinja zviri nyore pakati pezvitatu.
Gomo remagetsi bhasiketi A6AB26
A6AB26 ndeimwe yeakanakisa e bhasiketi kunze uko kune vakuru pamusika, classic yakakurumbira gomo e bike dhizaini, yakagadzirwa ine 6061 aluminium alloy chimango uye bhasikoro pacharo rinouya ne shock kusimamiswa forogo. Kune 26 inch, 27.5 inch uye 29 inch chimiro uye vhiri rim. Kugonesa KENDA matairi akasimba uye ane utsinye emakomo, achiwedzera nyaradzo pamawere emigwagwa. TEKTRO 160mm machisheni disc brake, shimano 7/9/21/27 kumhanya. Nhamba dzekumhanya dze25-35km / h ine 250w-500w brushless hub-mota inoita iyi bike yemagetsi kukoshesa kuve uine kana uri mumugwagwa kana munzira. Iyo bike yemagetsi ine bhero uye LED headlamp iri kupenya kwakanyanya, uye izvi zvakakwana pakutasva kwehusiku.
Kupukuta mafuta taya yemagetsi bhasikoro A7AM20
A7AM20 iri kupeta 20 inches inches tire bike yemagetsi ine simbi fenders, kumashure iraki, 3W LED kumberi mwenje ne USB yekuchaja chiteshi, pakati pe USB yekuchaja chiteshi inokubvumira kuti uzvidhaire kana kuchengetedza inotakurika yemagetsi pakukwira kana kumira. Iko kune 36v / 48v 10ah / 13ah / 15ah lithium bhatiri, inogona kuendeswa kunze kunzvimbo ine nzvimbo yokubuda kuenda kuchaja, 36v / 48v 250w / 350w / 500w / 750w brushless mota inogona kusarudza. Yakanyanya 7-kumhanya drivetrain ine yakakura LCD kuratidzwa uye thrumb throttle. Kuputira bhasikoro kuti riise kana kuisa mutiraki yemota inongoda matanho matatu, nyore uye nekukurumidza.
Yakakwirira simba mafuta emagetsi bhasikoro A7AT26
A7AT26 uya neyakagadziridzwa chizvarwa chechitatu bhasikoro furemu, iyo yakagadzirwa ne6061 aluminium alloy, inoratidzira yakasununguka 26 * 4 inch KENDA matai ane puncture kudzivirira uye yakaderera kuramba. Iyo yakagadzikana uye inokwanisa munzvimbo nyoro senge mulch uye jecha kana mweya mweya uchideredzwa. Simba repamusoro ndiro rinonyanya kuratidza, shandisa 48v 750w / 1000w, 60v 2000w mota isina brushless inobvumidza kumhanya kwepamusoro kwe55-60 km / h uye 48v / 60v 18ah / 20ah yakakura bhatiri. 180mm mechanicial disc brake rotors inopa yakanakisa yekumisa simba uye kutonga, kumbomiswa pamberi forogo, shimano 21 kumhanya, uye iyo mas mutoro ndeye 200kgs. Chigunwe chakabvarura chinodarika chinokambaira chinobatsira nguva dzese kuti zvive nyore kutanga uye kuwedzera simba kana zvichidikanwa.
Classic guta yemagetsi bhasikoro A3AL24
A3AL24 inoshandisa rakanakisa dhorobha dhizaini dhizaini, yakasununguka yemagetsi bhasikoro iyo inowanikwa mumatatu masyure saizi (24 inch, 26 inch uye 28 inch) uye maviri akaenzana mavara sarudzo (Chena uye Nhema). Zvakare nekusimba kwepurasitiki fenders, simbi rack, 3w fornt mwenje uye / 1 kumhanya. V-akamedura inopa yakakwana braking simba kana ichimira. 7v / 24v 36ah / 8ah bhatiri rine mhando mbiri dzekusarudza, imwe yakavanzwa, imwe iri kumashure kumashure. 10-25km / h kumhanya nekumota ine 32w mota isarudzo huru yekuenda. Iyi bhasikoro yemagetsi zvakare ndeimwe yemhando yakachipa uye inodhura.
Fat mafuta emagetsi bhasikoro A6AH20F
A6AH20F imwe inouya nematairi emafuta akakwana kumatrail ari munzira. Ndiyo imwe yemhando nyowani yebhasikoro yeShuangye, uye ine dhizaini yevakadzi, vatyairi vadiki. Yakagadzirwa ne100% aluminium alloy bhasikoro furemu, bhatiri iri nyore kuwanikwa kungori pasi pasi chubhu yefuremu uye iri bhatiri rinobvisika, kuti iwe ugone kurifambisa kuti inobhadharisa pane inobuda. Pane kumbomiswa kumberi kweforogo pane iyi modhi, saka matai neforogo zvese zvinogona kutora kukatyamadzwa. Iko kune vairety yemota paramende uye bhatiri kugona, senge 36v 10ah / 13.6ah, 48v 10ah / 13ah bhatiri kugona uye 36v 250w / 350w / 500w, 48v 500w / 750w mota paramende.
Kana iwe uchifarira rumwe ruzivo rwemagetsi bhasikoro, ndapota shanyira Wedu Official Website kana kusiira meseji pazasi.